Uvimba sinombuki zindwendwe onguRéka & Jakob
Le ndlu ikwishedi yezitena eneminyaka eyi-100. Inombono ocacileyo kumazantsi e-Havelland. Kumgangatho ophantsi kukho ikhitshi-igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa, i-terrace kunye negadi yabucala. Kumgangatho wokuqala igumbi lokulala, i-balcony eneembono zepanoramic kunye negumbi lokuhlambela elineshawa ekhangayo. Ummandla (ngaphandle kwezixhobo zangaphandle): I-40 yeemitha zesikwere, ilinen yelinen kunye neethawula zibandakanyiwe kwixabiso.
Indawo ephakamileyo edibeneyo (45 sqm) inokuqeshwa ukulungiselela le njongo. Ubuncinci abanye abantu aba-3 banokuhlaliswa apho.
Indawo yokuhlala kunye nefenitshala yakhiwa kwaye yanikwa ingqwalasela enkulu kwiinkcukacha kusetyenziswa izinto ezikumgangatho ophezulu, ezinye zazo zisuka kumaplanga asetyenzisiweyo kunye nezinto ezifunyenwe kwindawo. Ikhitshi ligcwele izinto zokupheka kunye nezixhobo zokupheka: Abo bathanda ukupheka baya kuziva besekhaya apha. Kwigumbi lokulala kukho ilayibrari encinci ye-bookworms. Kwi-terrace kunye ne-balcony kukho ifanitshala yeplanga ekhululekile kunye neendawo zokuhlala zelanga. Igrill iyafumaneka. Amanyathelo nje ambalwa egadini kwaye uhamba kwindawo yolondolozo lwendalo i-Havelländisches Luch. Iibustards ezinkulu ezinqabileyo, iicranes, amaxhama kunye neempungutye zinokubonwa sele zilele ebhedini.
Ukuhamba imizuzu emi-2 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseBuschow kunye nemizuzu engama-45 ngololiwe ukusuka eBerlin Mitte, ungonwabela ubunzulu bendalo kunye nesibhakabhaka esingenasiphelo ngokupheleleyo. Okanye: "Phambi koLwandle lweBaltic, ngasemva iFriedrichstrasse." (Tucholsky)
I-Märkisches Luch kunye nommandla ongqonge i-Nennhausen ukumema kuhambo oluninzi oluhle.
Iivenkile zasekuhlaleni: iibhakabhaka ezimbini eNennhausen (iikhilomitha ezili-10) kunye nebhula yaseSchnurr kwilali eselumelwaneni yaseRetzow (5 km) inokufikelelwa ngebhayisekile. Ivenkile yasefama izum Storchennest eDamme (iikhilomitha ezisi-8) inenyama ephilayo kunye neemveliso ezivela kwimveliso yayo.Iminyango embalwa ezantsi kwesitalato sethu yimyuziyam yokugcina iinyosi. Apho ungathenga ubusi, amaqanda amatsha kunye nemifuno yexesha. NgoLwesine kukho imakethi yeveki nganye kwisikwere semarike eNauen.
Ukuthenga kwivenkile enkulu: eNauen, eBrandenburg an der Havel okanye eRathenow. Konke malunga nemizuzu engama-20 yokuhamba. Ukuhlala ixesha elide, kuyenzeka ukuba u-Hello-Fresh uzise kuwe. Ukuhanjiswa kwephakheji ye-Rewe kwizinto ezihlala ixesha elide nako kunokwenzeka.
Kukho iindawo zokutyela ezininzi kwiilali ezikufutshane.
Ummelwane wethu othe ngqo ("Yr hen Felin - Alte Mühle eBuschow) naye urenta indawo yeholide ye-chic. Ukuba uneqela elikhulu, kunokwenzeka ukuba urente zombini izindlu kunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Réka & Jakob
Izitshixo zinikezelwa ngokwelungiselelo.
Ukutshaya kunye nepati akuvumelekanga kwigumbi.
Kwimeko yokuhlala ixesha elide, ukusetyenziswa komatshini wokuhlamba kunye nesomisi kunokwenzeka ngokuhlelwa.
Indawo yomlilo egadini ingasetyenziswa ngokucwangciswa.
Iibhayisekile ziyafumaneka ngentlawulo encinci.
Kunokwenzeka ukupaka imoto kwintendelezo.
Abantwana bamkelekile ukusebenzisa i-trampoline yethu.
Kwimeko yokuhlala ixesha elide, ukusetyenziswa komatshini wokuhlamba kunye nesomi…
URéka & Jakob yi-Superhost
Iilwimi: English, Deutsch, Magyar, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Märkisch Luch